Iimpahla zangaphantsi zamadoda |
Iimpahla zangaphantsi zamadoda
I-SX engenamthungo-iXXXL yesiko lesinqe esinqeni seElastic Mens Sport Boxer Briefs
Okona kubalaseleyo kumlo wamanqindi wamadoda kunye nezishwankathelo ngoku zezona zikhululekileyo, kwikotoni ethambileyo ephefumlayo. Isiqhamo seLoom Tag-Free Boxer Briefs zineebhanti zentuthuzelo engenamathe, imilenze engatyibilikiyo, kunye nokubhabha okunesimo esongezelelweyo senkxaso. I-IntelliFresh wicking ithintela iintsholongwane kunye nokufuma ukuba zihlale zintsha kuyo yonke imini.
Ubungakanani obuninzi obuPhethweyo beBurgundy Medium Men Trunk Underwear
I-Copper ifake ilaphu le-viscose ye-crotch ukugcina i-antimicrobial kunye ne-anti-odor. Ukufuma-ukujija kunye neziqu ezomileyo ngokukhawuleza ezinomtya obhinqileyo obhalwe uphawu lwe-logo logo Izinto zokwambathisa zigcina ubushushu ebusika kwaye zipholile ehlotyeni. .
Ubungakanani obuninzi obutofotofo obungenamthungo beS Sexy Snug obuPhefumlayo Amadoda yangaphantsi
I-tag yasimahla kuyo yonke imini yokuthuthuzela
Ukugubungela ngokupheleleyo, okufutshane kufanelekile
Ibhande lesinqe elingabophelelwanga
Cofa ukuvulwa kwemilenze yasimahla
I-Eco-Friendly Soft Moisture Wicking Spandex engenamthungo ye-Sexy Mens yangaphantsi
Umahluko wemigca kwi-elistband ye-elastic uzisa ukuqaqamba kokungacaciyo kwezi zibhokisi zomqhaphu webhokisi yomqhaphu kunye nokubhabha okuthe nkqo
Isinqe esirhabaxa, ngaphandle kwethegi ukuthuthuzela
Yonke imihla yenziwe ngcono: simamela ingxelo yabathengi kunye nokucokisa zonke iinkcukacha ukuqinisekisa umgangatho, ukulunga kunye nentuthuzelo
Umzekelo ngu-6'2 ″ kwaye unxibe ubungakanani obuPhakathi
Ukuphefumla kweSoft High Elasticity Underwear Mens Boxer Briefbriefs
Umatshini wokuhlamba ubanda. Sebenzisa kuphela i-chlorine bleach xa kufuneka. Sukusebenzisa isithambisi selaphu. Tumble eyomileyo esezantsi. Ungayi-ayini
Le yipakethe yombala eyahlukeneyo. Le pakethi inokuqulatha konke okuqinileyo, zonke iiprinta okanye indibaniselwano.
Ukuphefumla umnatha, inkxaso ebunjiweyo yempukane ibonelela ngokungenisa umoya apho uyifunayo
Ukuvavanywa kwabathengi, kuyilwe ngobuchule
Imilenze ayikhweli phezulu kunye ne-plush-backed tag kwi-waistband yasimahla ayizukupina okanye ukubopha
Ubunzima beBacterial Plus Ubungakanani esinqeni seBlue Elastic Daily Mens Briefs
Ilaphu elithambileyo, iphefumla kwaye ilula kuneengubo zangaphantsi zomqhaphu
I-3D U-POUCH YOKUGQIBELA I-ULTRA ROOMY: Uyilo lwe-U-poch ye-Ultra yongezwa kwi-sexy phantsi kweebhulukhwe ukubonelela ngendawo engaphezulu yamalungu abucala angamadoda ngaphandle kokukhutshelwa ngaphandle kwesithintelo. Kuyanceda ukuba uzithembe kwaye unxibe iimpahla zethu ezinkulu
Ukuhlala okuqinileyo kunye nokuthambileyo beka ibhanti enelogo yakudala elungileyo yokunciphisa ukhuthazo kulusu lwakho
Umbala oqhelekileyo we-Anti Static Soft Cotton Breathable Gay Men Underwear
Imidlalo yamadoda ephefumlelweyo yomlo wamanqindi ngelaphu elipholileyo likaDri eligcina ukufuma kude nolusu ukuze uhlale upholile kwaye womile; Ngamaxesha onke thega ukhululekile ukuba urhawuzelele ukhululekile simahla ngempukane yesintu.
Ukotini okhawulezileyo owomileyo weKotoni yangaphantsi yangaphantsi
Iingcaciso zeMesh Boxer: I-90% ye-polyester eyi-10% ye-spandex, yenye yezona mpahla zangaphantsi ziphefumlayo kwaye zomileyo ngokukhawuleza.
Iluncedo Ilaphu:Impahla yangaphantsi enokuphefumla kunye nokufuma iyakugcina womile kwaye upholile imini yonke. Impahla yangaphantsi yePoudew yamadoda ilungele ikhaya, ukuzilolonga, uhambo kunye nemidlalo.
Ukukhanya okuLumkileyo okuMnyama okuLukiweyo kwe-Mens yangaphantsi yangaphantsi
Ukuphefumla okumangalisayo kunye nokukhanya okulula ngokufuma komswakama kugcina umzimba wakho womile kwaye upholile imini yonke.
Ndiyabulela kule nzuzo yemeshini, iifutshane zethu zamanqindi yenye yezona mpahla zangaphantsi ziphefumlayo.
Hlala-beka ibhanti, uphefumle, ngokukhawuleza iifom ye-boxer boxer ikuvumela ukhululeke ngakumbi xa ushukuma.
Akukho rubbing okanye chafing stitching ekunika lula.
Isingxobo esisikiweyo esigcweleyo kunye nokunyuka ixesha elide kwigumbi elingaphezulu.
Ukuphuculwa kwentshukumo ye-gusset yokufumana intuthuzelo engakumbi.
Vula iCrotch Anti-Bacterial Breathable Cotton Mens Underwear Boxer
iimpahla zangaphantsi ezininzi zamadoda ngesiqhamo seLoom esinikezela ngaphandle kwethegi, intuthuzelo yosuku lonke kunye nokubhabha okwenziwe ngenkxaso; Impahla yangaphantsi yamadoda, iimpahla zangaphantsi eziphefumlayo ezinemikhono emibini yokuzikhusela; Inqaku le-IntelliFresh lokukhonkotha kwangaphantsi kwamadoda kuthintela ibacteria ebangela ivumba kwaye inika ukhuseleko lwexesha elide